​लोकदोहोरी गीत ‘मर्ने मिति’ले बनायो रेकर्ड, फरक अवार्डमा दुई दर्जन विधामा नोमिनेशनमा पर्न सफल
Saturday,2Dec, 2017 4:31 PM
पछिल्लो समय गीत संगीतको क्षेत्रमा सर्जकहरु बिचमा राम्रो, मौलिक तथा लोकप्रिय गीत निर्माण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । गीतलाई पृथक बनाएर होस् वा मौलिकता दिएर होस् सर्जकहरु आफ्नो गीतलाई उत्कृष्ट बनाउन चाहन्छन् ।
अहिलेको समयमा कुनैपनि गीत कति चल्यो भन्ने कुनै बलियो आधार नभएतापनि युटुब भ्युअर, अवार्ड नोमिनेशन लगायतका केहि कुराहरुलाई आधार मान्न सकिन्छ । नेपाली गीतसंगीतको बजारमा संगीतकर्मीहरुको हित, सम्मान तथा प्रोत्साहनका लागी धेरै विधामा अवार्डहरु दिँदै आइएको छ ।
संगीतकर्मी बिचमा अवार्ड हात पार्ने कुरालाई लिएर होडबाजी नै चल्छ । विभिन्न आधारमा गीत नोमिनेशनमा पर्ने गर्छ । अवार्ड यस्तो चिज हो जुन कुराले पुरानालाई सम्मान तथा नयाँलाई प्रोत्साहन मिल्छ । लोकप्रियताका आधारमा धेरै गीतहरु अवार्डको नोमिनेशनमा पर्ने गर्छन् । कतिपय गीत नोमिनेशनमै पर्दैनन् । कतिपय गीत थोरै मात्रामा पर्ने गर्छन् भने कतिपय गीत अत्यधिक मात्रामा नोमिनेशनमा पर्ने गर्छन् ।
धेरै अवार्डमा धेरै विधामा पटक पटक नोमिनेशनमा पर्ने मध्येको एउटा लोकप्रिय लोकदोहोरी गीत हो ‘मर्ने मिति’ । लोकदाहोरी गीत ‘मर्ने मिति’ सबैभन्दा धेरै नोमिनेशनमा पर्ने गीतमा पर्छ । स्रोता दर्शकबाट अत्यधिक रुचाइएको सो गीत विभिन्न अवार्डमा करिब २ दर्जन विधामा नोमिनेशनमा पर्न सफल भएको छ । पाँचौ पृथ्वी इन्टरटेनमेन राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्ड, बिन्धबासिनि म्युजिक अवार्ड लगायतका अवार्डमा नोमिनेशनमा परेको छ । यसपहिले धेरै विधामा अन्य गीतहरु नोमिनेशनमा परेका छैनन् ।
लोकदोहोरी गीत ‘मर्ने मिति’ नोमिनेशनमा पर्न सफल अवार्ड तथा विधाहरु
पाँचौ पृथ्वी इन्टरटेनमेन्ट राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्ड
३. ध्वनी मिक्सिङ
१०. उत्कृष्ट एल्बम
११. क्यामेरा मेन
राप्ती म्युजिक अवार्ड
बिन्धबासिनि म्युजिक अवार्ड
३. क्यामेरा मेन
२०७३ सालको अन्तिममा उक्त गीत भावना म्युजिक सोलुसनबाट सार्वजनिक भएको थियो । मोडल बिमल अधिकारी र डम्बर चन्द बगरको शब्द रहेको उक्त गीतमा रामु खड्काको लय सिर्जना रहेको थियो । त्यसैगरी चर्चित गायिका बिष्णु माझी र मोहन खड्काले सो गीतमा श्वर दिएका थिए । कपिल लामाको निर्देशन, सुजन शाहिको सम्पादन तथा सुरेश श्रेष्ठको छायांकनमा निर्माण भएको म्युजिक भिडियोमा मोडल बिमल अधिकारी र सारिका केसीको अभिनय रहेको थियो ।
गीत निर्माण गर्दा धेरै मेहनत गर्नुपरेको उक्त गीतका संगीतकार रामु खड्काले अनुभव सुनाउँछन् । गीत निर्माण गर्ने करिब छ–सात महिना लागेको अनी भिडियो निर्माण गर्नै ५ दिन लागेको उनी बताउँछन् । साथै गीतलाई पुर्णता दिन तथा केही फरक बनाउनको लागी बजेट पनि धेरै खर्च गर्नुपरेको उनको भनाई छ । अबको केहि समयमा मर्ने मिति ‘भाग २’ पनि ल्याउन लागीपरेको संगीतकार खड्काले बताए ।